Times Of Nepali » मेवाको खेतीबाट वार्षिक १६ लाख चोखो नाफा !
09 11 20 |
काठमाण्डौ । खेतीपातीबाट मोटो रकम कसरी कमाउने भनेर सोचिरहनुुभएको छ ? छ भने तपाईका लागि मेवाको व्यवसायिक खेती एक राम्रो विकल्प हुनसक्छ । पछिल्लो समय बजारमा आएको हाइब्रीड मेवाको खेतीबाट मोटो कमाईको संभावना औधी बढेको छ। तपाईले एक हेक्टर क्षेत्रफलमा मेवाको खेती लगाएर एक सिजनमा १६ लाखसम्म चोखो नाफा गर्न सक्नुुहुन्छ । यो खेतीको मुख्य विशेषता भनेको चाँडो बढ्ने र चाँडै फल दिने हो । एकवर्षमै यसले तपाईलाई फल दिन थाल्छ र मालामाल बनाइदिन्छ ।
एकपटक रोपिएको मेवाको बोटबाट तपाईले ३ वर्षसम्म निरन्तर उत्पादन लिन सक्नुुहुन्छ । यसकारण पछिल्ला २ वर्षहरुमा पहिलो वर्षजस्तो बिरुवा हुर्काउन हुने खर्च समेत कटौति हुनेछ । आउनुहोस् मेवाको खेती र यसबाट कमाउने तरिकाको बिषयमा जानिराखौं ।मेवाका लागि आवश्यक हावापानी तथा जमीनको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने नेपाल एक उपयुक्त देश हो । यसलाई ३० देखि ४० डिग्री सेल्सिएस तापक्रममा उमार्न सकिन्छ । यस्तो तापक्रम केही भाग छाडेर प्राय नेपालमा हरेक क्षेत्रमा पाइन्छ । तयार भइसकेको मेवाको बिरुवा खेतीकै लागि न्यूनतम ५ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा लगेर समेत रोप्न सकिन्छ ।
यसको अर्थको नेपालको पहाडी क्षेत्रमा समेत आरामले यसको खेती गर्न सकिन्छ । यस हिसाबले तपाईले नेपालको कुनै पनि कुनामा मेवाको व्यवसायिक खेती गर्न सक्नुुहुन्छ । मेवा खेतीका लागि तपाईले बजारमा कयौं देशी तथा विदेशी र हाइब्रीड बिउ पाउन सक्नुुहुन्छ । अझ भारतमा विकास गरिएका कैयन प्रकारका मेवाको प्रजातिहरुको बिज समेत नेपाली बजारमा सहजै पाउन सकिन्छ । खास गरी बजारमा पूसा मे’जेस्टी, पूसा जो’इन्ट, वा’सिङ्टन, सो’लो, को’यम्बटूर, ह’निड्यू, कुं’र्गहनिड्यू, पू’सा ड्’वार्फ, पू’सा डे’लिसियस, सि’लोन, पू’सा न’न्हा आदि प्रजातिको मेवाको बिउ बजारमा पाइन्छ ।
विदेशी बिजहरुमा चर्चित ताइवानी रेड लेडी तथा केही इजराइली किसिमको प्रजातिले पनि राम्रो फल दिन्छ । मेवाको व्यवसायिक खेती गर्ने किसानहरुका अनुसार मेवाको एक स्वस्थ रुखले एक सिजनमा ४० केजीसम्म फल दिनसक्छ । उनीहरुका अनुसार तपाईले २ बिरुवाको बीच कम्तीमा ६ फिटको अन्तर राख्नुुपर्छ । यस हिसाबले तपाईले एक हेक्टरमा २२५० रुख तयार गर्न सक्नुुहुन्छ । यो हिसाबले तपाईले एक सिजनमा एक हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको खेतीबाट ९०० क्विन्टल मेवा उत्पादन गर्न सक्नुुहुन्छ । मेवाको बिरुवा निकै संवेदनशील हुन्छ ।
त्यसकारण यसको आसपास तापमानलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । गर्मीमा चल्नसक्ने लुु(तातो हावा) र जाडोयाममा चल्ने चिसो हावा दुवैले मेवाको बिरुवालाई क्षति पुर्याउन सक्छ । बच्नका लागि खेतको उत्तर र पश्चिममा हावा रोक्नका लागि केही न केही व्यवस्था अवश्यक गर्नुहोला । धेरै पानी मेवा खेतीका लागि नोक्सानदायी हुन्छ । यसकारण खेतमा पानीको निकासको उपयुक्त व्यवस्था पहिलादेखि नै गर्नुपर्छ । धेरै पानीका कारण अनेकन समस्या आई मेवाको बिरुवा सखाप हुनसक्छ । एक हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको मेवा खेतीबाट एक सिजनमा तपाईले १६ लाखभन्दा बढी नाफा गर्न कमाउन सक्नुुहुन्छ ।
एक हेक्टरको खेतीबाट ९०० क्वीन्टल मेवा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अगाडि नै भनिसकिएको छ । थोक मूल्यमा मेवालाई तपाईले न्यूनतम २४ रुपैयाँ प्रतिकेजीको हिसाबले बिक्री गर्न सक्नुुहुन्छ । यो हिसाबले बिक्री गर्दा तपाईलाई एक क्वीन्टलमा २४०० रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ । यो हिसाबले तपाईले एक हेक्टरबाट उत्पादन हुने हुने मेवाबाट २१.६० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानी गर्न सक्नुुहुन्छ । एक हेक्टर मेवाको खेती गर्दा तपाईको लागत करिब ५ लाख रुपैयाँसम्म हुनसक्छ । बिउ खरीदमा २५ हजारसम्म खर्च हुनसक्छ ।३० हजार अन्य खर्च जोड्दा समेत तपाईलाई एक हेक्टर क्षेत्रफलमा मेवाको खेती गरेर १६ लाख चोखो नाफा गर्न सक्नुुहुन्छ, त्यो पनि एक सिजनमै ।
अनुुभवी किसानहरुका अनुसार मेवाको राम्रो खालको बिउ केही महंगो पर्न सक्छ । राम्रो बिउलाई प्रति १० ग्राम ५ हजार रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ । १० ग्राममा करिब ७०० बिउ हुन्छ । रोपेदेखि बिरुवा उत्पादन गर्दासम्म तपाईको करिब ५० प्रतिशत बिउ नष्ट हुनसक्छ र ५० प्रतिशत बिउ मात्र बिरुवाको रुपमा उम्रन सक्छ । यसकारण बिउमा विशेष ख्याल गर्नुहोला । यदि तपाई आधुनिक ढंगले मेवाको व्यवसायिक खेती गर्न चाहनुुहुन्छ भने जिल्लास्थित जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तथा कृषि केन्द्रहरुमा सम्पर्क गर्न सक्नुुहुन्छ ।
कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा तपाईले विज्ञहरुलाई समेत भेट्न सक्नुुहुन्छ, उनीहरुसँग स्थानीय माटो तथा हावापानी सुहाउँदो बिउ तथा अन्य बिषयमा समेत सरसल्लाह गर्न सकिन्छ । यस्तै, बजारमा उपलब्ध बिउबिजनका दोकानबाट समेत आवश्यक जानकारी पाउन सकिन्छ ।
सांसद विमला वलीले पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित ४ जनाविरुद्ध अ’प हरण तथा शरीर ब’न्धकसम्बन्धी किटानी जाहेरी
NO MCC भन्ने एकमात्रा रास्ट्रप्रेमी नेता ओलिको सर्बोपरी चर्चा
अबको चुनावपछि प्रचण्ड कार्यकारी राष्ट्रपति पक्का !
आखिर किन हुनेभयो अब देश कम्तीमा चार दिन बजेटविहीन, सरकारी खर्च बन्द
मासिक तलब हाल ४० हजार तीन सय ८० रुपैयाँ तलब बुझ्ने ओलीका पूर्व पिएसओको करोडौंको बंगला
एमाले बैठक आजै अपरान्ह ३ बजे बस्ने गरी स्थगित
एमालेको माग कसैले पनि हल गर्न सक्दैन : गगन थापा
हामीले भनेको कुरा केपी ओलीले मान्दैनन् : सुवास नेम्वाङ
कुलमानप्रति ओलीको टिप्पणी- ‘नक्कली ट्रान्सफर्मर किन्ने व्यक्तिलाई फेरि जिम्मेवारी दिइयो’
केपी ओलीका लागि निर्मम बनेर निस्कियो देउवा सरकार, लियो अहिलेसम्मकै कडा एक्सन !
‘हामीले पद पायौं, संविधान/कानून किन चाहियो ?’